Fanesorana ny famantaranandro Ikea Lottorp na Klockis - Ikkaro
firosoana >> Fanodinana vilany elektronika sy mekanika >> Fanesorana ny famantaranandro Ikea Lottorp na Klockis
Löttorp na Klockis no iantsoana azy io, heveriko fa novain'izy ireo ilay anarana ary dia famantaranandro tsotra, fanairana, famantaranandro ary thermometer izay amidiny ao Ikea amin'ny € 4 na € 5. 4 amin'ny iray. Mety tsara raha manana azy any an-dakozia, efi-trano sns. Ny zavatra tsara amin'ity famantaranandro ity dia ny fampiasana azy, mora dia mora ny mifamadika eo amin'ireo maody fiasany, mila mihodina fotsiny ilay famantaranandro ianao. Araka izany, rehefa mihodina ianao, dia hiseho eo amin'ny fampisehoana ireo fandrefesana samihafa. Adala ny zanako vavy rehefa tratrany. Isaky ny fihodinana azy dia mitomany ary misy jiro hafa loko :)
Tsy mividy zavatra matetika aho hanalana azy ireo, manararaotra zavatra hatrany amin'ny fako na fanodinana, saingy tsy afaka nanohitra aho tamin'ity indray mitoraka ity. Nihazona azy an-tanana aho dia lasa liana liana. Ho vitako ve ny mampiasa ny seho miaraka amin'i Arduino? Inona ny sensor hampiasan'izy ireo handrefesana ny maripana ary hahitana ny fiovan'ny toerana? Misy ve ny hack hack mahaliana azo atao amin'ny fiambenana? Fa ambonin'izany rehetra izany, ny tena nahaliana ahy indrindra dia ny inona ilay tabataba malefaka naheno anao rehefa ahofahofanao? Fa maninona no misy zavatra malalaka ao anatiny? Ary tsy amin'ny famantaranandro, fa amin'ny rehetra.
5 €? Mbola loharano misy singa mora vidy? Ao amin'ny Amidin'i Amazon amin'ny vidiny 13 € izy ireo, any amin'ny fivarotana manana izany ianao amin'ny € 5
Fijery nipoaka na ahoana ny fomba famongorana ilay famantaranandro
Nijoro teo alohan'ny famantaranandro aho nieritreritra fa ho asa mora izany. Saingy toa ny an'ny Ikea dia tsy maniry antsika hahita ny ao anatiny amin'ilay fitaovana. Tsy misy visy, na kiheba, na sakana, ny vatana iray manontolo dia singa iray. Mijery aho ary mijery fa ny eo aloha ihany sisa. Ka amin'ny fanaintainana rehetra ato am-poko no andehanako any, tena ilaina ve ny manao azy toy izao?
Handao anao horonan-tsary misy fijery nipoaka aho, saingy manana olana amin'ny fanitsiana azy aho. Raha azoko dia ampiako. Ny tena marina dia tsy nadio izy io :-( Nizara roa tsy ilaina aho, nieritreritra fa noterena aho tamin'ny tsy nijanona nieritreritra raha misy fomba hafa. Ho an'ny tsy fampijanonana ny horonantsary sy fandraisam-peo azy io indray mandeha. mpanolotsaina tsara.
Raha tianao izany esory madio izy araho ny dingana manaraka:
tsy maintsy manainga ny tapany eo aloha ianao amin'ny visy birao ohatra, ny plastika ihany no toa miaro.
Hahita sticker iray manarona ny endriny iray manontolo ianao, miaraka amin'ny alàlan'ny fanodinam-bidy, izay misy banga ary atsofohyo izy, misy ny visy ary tsy mila manery na inona na inona
Amin'ity sary manaraka ity, jereo ireo sombin-javatra roa eo ankavia, izy ireo no lakilen'ny fanalana azy roa tsara.
Raha vantany vao hitanao ny fomba fanaparitahana azy. Mamela antsipiriany vitsivitsy momba ny famantaranandro fanairana ao anatiny aho. Ny iray manontolo dia tsotra ary tsy hitako izay zavatra mahasoa maro. Fa ilay boaty fotsy kely izay mitabataba no vatosoa amin'ny satro-boninahitra.
Manokatra azy aho hahitako hoe maninona izy no mitabataba, ary mijery. ny sensor sensor toerana. Efa fantatsika ny fomba fifehezany ny toerana hanehoan'ny famantaranandro fomba iray na iray hafa. Amin'ny sary dia marindrano izy io, saingy tena io, mandeha ny famantaranandro fanairana, hany ka ny baolina vy dia manohina fantsona roa hatrany. Toa fomba mahira-tsaina be izany amiko ary afaka manao tahaka ny tetik'asa maro isika.
Isaky ny mihodina ny famantaranandro dia manova ny fomba sy ny lokon'ny efijery. Io fotsiny no manao azy jiro miaraka amin'ny tariby RGB
Sary iray hafa hahafahanao mahita ny ampahany amin'ny solaitrabe sy ny kely ananany hanararaotana ilay faritra.
Fijerena bip na ahoana ny fomba hampiatoana ny tabataba amin'ny fihodinana
Rehefa namarana an'i Lottorp aho dia nanomboka nitady izay nataon'ny olona. Tsy dia misy fampahalalana betsaka, raha tsy hilaza fotsiny, 2 na 3 fotsiny, eny ny hack na fanovana izay mety mahasoa. Satria raha misy zavatra mahasosotra amin'ity famantaranandro ity dia isaky ny mihodina ianao dia mitomany. Alao an-tsaina hoe maraina be dia manana ny maody mari-pana ianao ary te hahita ny fotoana satria rehefa mampirehitra azy ianao dia mirehitra ny jiro ary beeeep. Tena mahasosotra izany ary azonao atao ny mamoha ny mpiray efitra aminao. Voavaha izany
Raha vantany vao ataoko amin'ny famataranandro fampiasanay io dia holazaiko anao ny fandehany.
Sokajy Fanodinana vilany elektronika sy mekanika Ticket navigation
Vita ny taranja Coursera Machine Learning
Alimanaka Dodecahedron ho an'ny taona 2018
Fanehoan-kevitra 6 momba ny "Famongorana ny famantaranandro Ikea Lottorp na Klockis"
2 Janoary 2018 amin'ny 10:05 hariva
Tsy olona mahay mihitsy aho (tanana be fotsiny), saingy tsy maintsy milaza aho fa diso ny anjaranao, ary mahafinaritra ahy foana ny mamaky azy ireo .. Manantena aho fa handray anjara amin'ny 2018 .. :)
2 Janoary 2018 amin'ny 10:17 hariva
Misaotra betsaka amin'ny fanohananao. Mifankasitraka foana izy ireo, tena :) Andao hojerentsika ny fomba hitrangan'ny taona 2018, miaraka amin'ny asa sy ny fianakaviana dia sarotra be ny manaraka ny tahan'ny famoahana.
11 Janoary 2018 tamin'ny 11:54 maraina
Ny tena tiako ho fantatra dia ny integrated (uC) dia eo ambanin'ny boloky ny mainty ...
11 Janoary 2018 amin'ny 12:55 hariva
Eny, amin'izay heveriko fa tsy afaka manampy anao aho :-(
20 aprily 2020 amin'ny 6:54 hariva
Tena ilaina! Misaotra! Nila nanala ity famataranandro ity aho ary nanakana ahy tsy handrava azy
22 aprily 2020 amin'ny 8:25 hariva
Raha mahita zavatra hafa mety mahasoa ianao dia aza misalasala mampahafantatra anay.